Chelsea Oo Ka Naxday Natiijada Sawirrada Ben Chilwell & N'Golo Kante Oo Xalay Dhaawacmay - Laacib
HomeWararka CiyaarahaChelsea Oo Ka Naxday Natiijada Sawirrada Ben Chilwell & N’Golo Kante Oo Xalay Dhaawacmay
Chelsea Oo Ka Naxday Natiijada Sawirrada Ben Chilwell & N’Golo Kante Oo Xalay Dhaawacmay
Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa ka naxdin natiijada sawirrada laga qaaday xiddigihii xalay kaga dhaawacmay kulankii Champions League ee Juventus ee Ben Chilwell iyo N’Golo Kante oo laga saaray garoonka iyadoo ciyaartu socota.
Waxa jirta cabsi ah in muddo dheer ay Chelsea weydo ugu yaraan midkood labadan ciyaartoy, kaas oo la filayo in dhaawaciisu uu halis noqdo kaddib markii ay soo baxeen natiijada baadhitaannada hordhaca ah.
Difaaca bidix ee reer England ee Ben Chilwell ayaa ah midka cabsida ku riday kooxdiisa ee dhaawaciisu uu halista yahay, waxaana la sheegay in jilibka ay waxyeello weyn kasoo gaadhay, isla markaana uu muddo dheer maqnaan doono.
Laacibkan ayaa garoonka dhexdiisa jiibsaday iyadoo 19 daqiiqadood ka hadhsan yihiin dhamaadka ciyaartii ay kooxdiisu 4-0 ku xasuuqday Juventus ee ay hoggaanka ugu qabatay Group H.
Iyadoo uu wali socdo baadhitaanku, Chelsea ayaa heshay jawaabta hordhaca ah, waxaanay qiimaynayaan xaaladda si ay jawaabta ula wadaagaan taageereyaasha.
Wararka hordhaca ah ayaa sheegay in Chilweel uu garoomada ka maqnaan doono lix illaa sagaal bilood, taas oo ka dhigan in xilli ciyaareedkan uu macasalaameeyey.
Chelsea ayaa sidoo kale qiimaynaysa xaaladda laacibka khadka dhexe ee N’Golo Kante oo isaguna jilibka wax ka noqday intii ay socotay ciyaartii Juventus, garoonkana ka baxay daqiiqaddii 37aad ee qaybta hore.
Dhaawaca N’Golo Kante ayaa la sheegayaa in aanu halis u ahayn sida Ben Chilwell oo kale.